#Xaaf oo Aqbaley dalabkii DF ee doorashada laaleyna heshiiskii Ahlu Sunna - Get Latest News From Horn of Africa
#Xaaf oo Aqbaley dalabkii DF ee doorashada laaleyna heshiiskii Ahlu Sunna
By WARIYAHA CAALAMKA On Jun 24, 2019
DHUUSAMAREEB, Galmudug – Madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf ayaa waxa uu ku dhawaaqey in uu gebi ahaanba buray heshiiskii Jabuuti ee ay ku midoobeen maamulada Ahlu Sunna iyo Galmudug.
Axdigaasi ayaa waxaa magaaladda caasimada ah ee Muqdisho kuwada saxiixay hogaanka labadaasi dhinac 6-dii bishii December ee 2017-kii xili uu goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Farmaajo.
Sidda laga soo xigtay war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Xaaf oo ku taariikheysan 24-ka June 2019-ka, waxa uu sidoo kale ogolaadey dalabka dowladda oo ku aadan qabashada doorashada.
Xukuumada ayaa horey u soo jeedisay in coddeynta ay qabsoomeyso bisha Julaayo ee sanadkan 2019. Talaabadaasi waxaa loo arkay mid ay ku raadineyso Villa Soomaaliya in ay bedasho Xaaf.
“Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha [ayaa waxay] kawada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashada iyo dib uheshiisiinta,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Geesta kale, madaxweyne Xaaf ayaa daboolka ka qaadey in la dhameeyay kala aragti-duwanaanshiyahii kala dhaxeysay Madaxtooyadda oo cadaadis xoogan ku saartay sidii uu miiska wada hadalka u imaan lahaa.
WAR-SAXAAFADEEDKA OO DHAMEYSTIRAN
1. In uu buray heshiiskii Jabuuti ee Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljamaca oo lagu saxiixay Muqdisho 06/12/2017.
2. In laqabto Doorashadii Dowlad Goboleedka Galmudug.
3. In Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha kawada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashada iyo dib uheshiisiinta.
4. In ay dhamaatay kala aragti duwanaan shihii Dowladda Federaalka iyo Galmudug.
5. In doorashadu ka dhacdo caasimadda kumeelgaarka ah ee Cadaado.
1. Badalidda astaanta Galmudug
2. Badalidda Dastuurka Galmudug
3. Dhismaha Madaxa Xukuumadda
4. Badalkii Gudoomiyihii Baarlamaanka iyo Madaxweyne Ku-xigeenkii
5. Isku darka Golaha Baarlamaanka
6. Dhismaha Golahii Wasiirada cusbaa
Go’aanadan kasoo baxay xafiiska Xaaf ayaa waxay kusoo beegmayaa iyadda oo uu galabnimadii Axada uu ka hayaamay Dhuusamareeb isla markaana ku hoyday degaanka Godinlabe ee duleedka Cadaado.
Kala tegitaanka xarunta gobolka Galgaduud ayaa timid kadib muddo laba maalmood ah oo wasiirka arrimaha gudaha federaalka uu ku sugnaa halkaasi uuna wada dadaalo lagu dhameynayo xiriirka Xaaf iyo dowlada oo xumaadey.
Villa Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in heshiis qarsoodi ah ay la gashay hogaanka Ahlu Sunna taasi oo soo dadejisay in uu Xaaf soo gabagabeeyo joogitaankiisa caasimada rasmiga ah ee Galmudug.